Meraki or Viptela – NEX4 Blog
Meraki or Viptela
ဒီတစ်ခါမှာတော့ Cisco ကနေ ပေးတဲ့ SD-WAN Solutions နှစ်ခုဖြစ်တဲ့ Meraki နဲ့ Viptela ထဲကမှ ကိုယ့်ရဲ့ WAN Architeture အတွက် မှန်ကန်တဲ့ Solution ကို ဘယ်လို အချက်တွေပေါ်မှာမူတည်ပြီး ရွေးချယ်သင့်သလဲ ဆိုတာကို ပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
❇ ကိုယ့် Organization မှာ IT Resources တွေ ဘယ်လောက်သုံးထားလဲ?
ရုံးခွဲ (Branch) တွေမှာ SD-WAN Deployment တွေ၊ WAN Monitoring ပိုင်းတွေ ၊ Management ပိုင်းတွေလုပ်ဖို့အတွက် IT Staff အများကြီး မရှိပါဘူး။ ပြီးတော့ SD-WAN Solution ကို Branches တွေအတွက် Plug And Play Deployments လုပ်ပြီး လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ သုံးချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Cloud ကို အခြေခံထားတဲ့ Meraki ကို ရွေးချယ်သင့်ပါတယ်။
Viptela ကတော့ Enterprise-Level (Banks တွေ၊ Large Businesses တွေ) အတွက် SD-WAN Deployments လုပ်ဖို့ သင့်တော်ပါတယ်။ Enterprise မှာ Network Architecture ကို ကောင်းကောင်းသိပြီး Manage လုပ်နိုင်မဲ့ IT Staff တွေရှိမယ်ဆိုရင်တော့ Viptela ကို ရွေးချယ်ပါ။
❇ ကိုယ့် Organization က လက်ရှိ သုံးနေတဲ့ Cloud Infrastruture က Public လား Private လား?
Organization မှာ Public Cloud( AWS သို့မဟုတ် Azure ) သုံးထားတယ်ဆိုရင်တော့ Cloud-Based Meraki ကို ရွေးချယ်ပါ။
ကိုယ်ပိုင် Datacenter ရှိတယ် ဒါမှမဟုတ် Private Cloud ကို သုံးထားတယ်ဆိုရင်တော့ Viptela ကို Deploy လုပ်ပါ။
❇ ဘယ်လို Network Connections အမျိုးအစားတွေအတွက် သုံးမှာလဲ?
Meraki ကတော့ Ethernet နဲ့ LTE Connections တွေအတွက် အဓိက Support လုပ်ပါတယ်။
Viptela ကတော့ အရှေ့က Connections တွေအပါအဝင် ကိုယ်ပိုင် Service Provider ဆီက ယူထားတဲ့ T1 လိုင်းတွေနဲ့ Digital Subscriber Lines (DSL) တွေအတွက်ပါ Support လုပ်ပါတယ်။
❇ ကိုယ့် Network Infrastructure အတွက် ဘယ် Features ဟာ အလိုအပ်ဆုံးလဲ?
Basic SD-WAN Features တွေနဲ့ Security Features တွေကို All In One ရနိုင်ပြီးတော့ ရိုးရှင်းတဲ့ User Interface ကနေပဲ Branch တွေအကုန်လုံးကို လွယ်လွယ်ကူကူ Manage လုပ်ချင်ရင်တော့ Meraki ကို ရွေးချယ်ပါ။
ကိုယ့်ရဲ့ WAN Topology က မရိုးရှင်းဘူး။ Complex ဖြစ်တယ် ၊ Networks တွေကို သက်သက်စီ Segmentation လုပ်ပြီးတော့ လုံခြုံစေချင်တယ် ၊ Vitrual Private Cloud(VPC) Workloads အများကြီးရှိရင်တော့ Viptela က သင့်တော်ပါတယ်။
❇ Cost ဘယ်လောက်သုံးချင်တာလဲ?
Meraki ကကော Advanced License လောက်ပဲ ဝယ်ထားပြီး သုံးနိုု်င်တဲ့အတွက် Cost က Viptela နဲ့ ယှဉ်ရင် နည်းပါတယ်။
Viptela မှာက Advanced Routing တွေပါမယ် ၊ ပြီးတော့ Cloud Security နဲ့ Complex WAN Environments တွေကို Manage လုပ်နိုင်တဲ့ စွမ်းရည်တွေ ရှိတဲ့အတွက် Cost က ပိုပြီးမြင့်ပါတယ်။
❇ လက်ရှိမှာ Infra အတွက် ဘယ် Cisco နည်းပညာတွေကို သုံးထားတာလဲ?
Wi-Fi တွေ ၊ Routing နဲ့ Switching တွေနဲ့ Security တွေအတွက် Cloud Controlled Meraki Solutions တွေကို သုံးထားတယ်ဆိုရင်တော့ SD-WAN Deployments အတွက်ပါ Meraki ကို ရွေးချယ်ပါ။
‍‍‍‍‍‍တကယ်လို့ Infra မှာ Integrated Service Router(ISR) တွေသုံးထားတယ်ဆိုရင်တော့ ၎င်းအပေါ်မှာ Viptela ကို Deploy လုပ်ဖို့ ရွေးချယ်လိုက်ပါ။
❇ NEX4 အနေနဲ့ကတော့ Cisco SD-WAN Solutions နှစ်ခုဖြစ်တဲ့ Meraki နဲ့ Viptela တို့ကို Customers တွေရဲ့ Requirements နဲ့ အညီ Deployments တွေ လုပ်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။ စာဖတ်သူတွေအနေနဲ့ အပေါ်က အချက်တွေကို ကြည့်ပြီး ကိုယ့်အတွက် မှန်ကန်တဲ့ Cisco SD-WAN Solution ကို ရွေးချယ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။